VITORETXEA. Yiza ukhuphe unxibelelwano kwaye wonwabe - I-Airbnb
VITORETXEA. Yiza ukhuphe unxibelelwano kwaye wonwabe
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguJorge
Indlu encinane eseAguilar de Codés, idolophu enabemi nje abangama-50 ebekwe emazantsi eenduli zeYoar nasembindini weSierra de Codés. Sithathele ingqalelo nezona nkcukacha zincinci ukuze ukwazi ukonwabela iintsuku ezimbalwa zoxolo noxolo kwaye uzive usekhaya.
Ukuba ujonge ukubaleka kwisiqhelo kwaye ujikeleze ngoxolo, ukuzola kunye nendalo, yiza usityelele.
Le ndlu yakhiwe ngo-1880 kwaye yahlaziywa ngo-2019.
Inamagumbi okulala amathathu, elinye linegumbi lokuhlambela labucala, elinye igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, ikhitshi elikhulu-igumbi lokutyela, iholo kunye negumbi lokuhlala elineesofa, itafile kunye nesitovu sepellet esifudumeza yonke indlu. Onke amagumbi okulala anomabonakude. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngazo zonke izixhobo onokuthi uzifune (i-oveni, umenzi wekofu, i-microwave ...) Sikwabonelela ngezinto zokulala kunye neetawuli.
IAguilar yidolophu ezolileyo kakhulu kodwa inomhlaba omhle kunye nobutyebi benkcubeko. Ukusondela kweSierra de Codés kusinika ukonwabela ukuhamba okungenakubaleka kwaye sityelele iindawo ezinomdla njengenye yeeflethi zetyuwa ezimbalwa ezisasebenza eNavarra, i-hermitage yaseSan Bartolomé (ilitye elinqabileyo le-Romanesque) ...
Inombolo yomthetho: UATR0983
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Aguilar de Codés